Safal Khabar - प्रेमिले उपहारमा आइफोन नकिनिदिएको भन्दै प्रेमिकाले सबैको अगाडि हानिन् ५२ झापड (भिडियो)
प्रेमिले उपहारमा आइफोन नकिनिदिएको भन्दै प्रेमिकाले सबैको अगाडि हानिन् ५२ झापड (भिडियो)
आइतबार, १९ जेठ २०७६, १८ : ०१
एजेन्सी । प्रेमिकाले सायद प्रेमीले भ्यालेन्टाइन्स डेमा नयाँ आइफोन उपहारमा देलान् र सानका साथ चलाउँछु भन्ने सपना देखेकी थिइन् । आफूले सोचेको जस्तो नभएपछि प्रेमिका रिसले आँखा नदेख्ने भइन् र सार्वजनिक स्थानमा नै प्रेमीलाई ५२ पटक चड्कन लगाइन् ।
सुन्दा अचम्म लाग्ला तर घटना साँचो हो । एक चीनियाँ प्रेमीले प्रेमिकालाई आइफोन नदिएपछि सार्वजनिक स्थानमा हिंसा सहनुपरेको छ ।
प्रत्येक तीन वर्षमा एकपटक मार्च महिनाको २० तारिखमा चीनमा भ्यालेन्टाइन्स डे मनाइन्छ । तर सिचुवान प्रान्तका एक जोडीले प्रेम दिवसलाई भिन्न तरिकाले मनाए । नजिकै जडान गरिएका सिसिटीभी क्यामराका साथै त्यहाँ उपस्थित मानिसले खिचेको भिडियो पछि सोसल मिडियामा सार्वजनिक गरियो । उक्त भिडियोमा एक युवतीले आफ्ना प्रेमीलाई उपहारस्वरुप आइफोन नदिएको भन्दै चिच्याएर गाली गर्दै थप्पड हानेको देख्न सकिन्छ । उक्त फुटेजमा सबै झापड नदेखिएपनि पुलिसले ती व्यक्तिले ५२ बढी झापड खाएको पुष्टि गरेका छन् ।
प्रेमिकाले त्यसरी झापड हानिराख्दा पनि ती युवक केही नभनी, हलचल नै नगरी बसेको देखेर सबै चकित परेका छन् ।
पुलिसले उनीहरुलाई त्यहाँबाट हटाउन खोज्दा ती पुरुषले भने, ‘मैले नै गल्ती गरेको हुँ । उनले चाहेको जस्तो उपहार मैले दिन सकिनँ । उनको रिस शान्त हुन्छ भने म उनले हानेको जति पनि झापड खान तयार छु ।’
यो जोडीले आफ्नो झगडा पुलिस थानामा सल्टाउँदै आइन्दा आफ्नो समस्या सभ्य तरिकाले सुल्झाउने बचन दिएको बताइन्छ ।
व्यवसायी अर्थात एसियाकै सबैभन्दा धनिको सूचिमा रहेका मुकेश अम्बानीका छोरा आकाश अम्बानीले गोवामा ‘प्री–इनगेजमेन्ट’ गरेका...
के तपाईं लाई थाहा छ ? पिशावबाट यसरी गर्न सकिन्छ मोवाईल चार्ज !
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तपाईलाई अचम्म...
मान्छेको बोली मर्नुअघि किन बन्द हुन्छ ?
मान्छे जन्मेपछि अवश्यै मर्नुपर्छ र कहिले मरिन्छ...